Soomaaliya maka maarantaa ciidammada ajaaniibta ah? - BBC News Somali
17 Jannaayo 2018
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa weli ku guda jira safar uu ku marayo qeybo ka mid ah dalka, wuxuuna la kulmayaa soo dhoweyn ballaaran.
Waxaa la filayaa in uu maanta goobjoog ka noqdo dhaqangalka heshiiskii ay wada saxiixdeen maamulka Galmudug iyo Ahlu-sunna Waljamaaca.
Hadaba madaxweyne Farmaajo waxaa amnigiisa sugaya ciidammo Soomaali ah. Waa markii ugu horeysay oo ay sidan dhacday tan iyo markuu bilowday dagaalka Al-Shabaab.
Sababta ugu weyn ee ciidammada AMISOM dalka u joogaan ayaa horey loogu sheegay in ay illaaliyaan madaxda dowladda iyo xarumaha muhiimka ee dowladda leedahay.
"Sida heerka sare ah ee loo xoojiyay ammaanka Madaxweynaha Soomaaliya ee socdaalka ku maraya gobolada dalka, tusaale ma u tahay in dalka uu ka maarmayo ciidammo shisheeye?"ayuu is weydiiyay Xasan Xayle oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Safarka madaxweynaha wuxuu ka bilowday Garowe halkaas oo ay ku ilaalinayeen ciidammo ka raacay Muqdisho iyo kuwa maamulka Puntland iyo Kuwa Galmudug.
Image caption Madaxweynaha oo ku dhexjira dad shacab ah oo ku soo dhoweeyay Gaalkacyo.
Meelaha qaar waxaa la arkayay madaxweynaha oo ku dhexjira dad shacab ah oo ay ka muuqato kalsooni aad u badan.
Xasan Xayle wuxuu yiri: "Waxaa aad u muuqatay, ka sokow soo dhaweenta diiran, sida ay ciidammada ammaanka ee jooga magaalooyinka uu booqday Madaxweynuhu u hubeysanyihiin una abaabulanyihiin ee ay u ilaalinayaan nabadgelyada iyagoo si aad ah u xajinaya ammaanka Madaxweynahay iyo martida la socota".
Wuxuu madaxweyne Farmaajo ku safray dhulka laga billaabo Garowe illaa Boosaaso iyadoo ay ilaalinayeen ciidammo Soomaali ah. Meelaha qaar ee uu ku safray waxaa ku yaalla buuro waxaana mararka qaar ku dhuunto mintidiinta Al-Shabaab.
Lahaanshaha sawirka Mahamad Yusuf Tigay
Image caption Ciidammo saaray buuraha dushooda oo sugaya amniga madaxweynaha
Balse waxaa goobaha qaar ku sugnaa ciidammo Soomaali ah oo aad u hubeysan oo saaran buuraha dushooda kuwaas oo sugaya amniga muddadii uu madaxweynaha ku jiray safarka dhanka dhulka ah.
Ka dib wuxuu u gudbay dhanka Gaalkacyo illaa cadaado oo uu dhulka ku safray, wuxuuna u sii tallaabay magaalada Dhuusamareeb.
Goboladda dhexe qeybo ka mid ah waxaa ku sugan Alshabaab, iyaga oo xitaa awood u leh in ay weeraro ka geystaan meelaha aysan joogin.
Ma jirtaa meelo aan looga maarmin ciidammada ajaaniibta ah?
Intii madaxweynaha uu ku jiray safarkiisa dhulka lama arag ciidammo shisheeye, inkastoo dadka dhalleeceeya ay ku doodayaan in ay ajaaniibta si qarsoon u ilaalinayaan madaxweynaha.
Balse Xasan Xayle ayaa qabo aragti ah in ciidammada Soomaaliya ay ku filan yihiin sugidda amniga madaxweynaha iyo guud ahaan dalka.
"Arrintan waxay dhalisay su'aasha ah: Soomaaliya ma waxay xagga ammaanka ku dhawaatay in ay ka maaranto joogitaanka ciidamada shisheeye", ayuu yiri.
Image caption Madaxweyne Farmaajo, Gaas iyo Xaaf oo ku wada sugan Gaalkacyo
Ciidammada sida rasmiga loo og yahay ee ajaaniibta ah ee Soomaaliya ka howlgala waa kuwa AMISOM oo hadda isu diyaarinaya in ay ka baxaan Soomaaliya, balse waxaa jira kuwa kale oo aan AMISOM ka tirsanayn oo la sheego in qaab tabobar ay u joogaan, kuwaas oo ka socda Maraykanka, Britain iyo waliba Turkiga.
Xitaa dalalka ku jira AMISOM waxaa la sheegaa in ay dalka soo galiyaan ciidammo ka dheeraad ah kuwa ku xusan sharciyadda AMISOM, balse wali taas xaqiiqo looma hayo.
"Si kastaba, waxay ila tahay in aan weli la gaarin waqtigii ay noqon laheyd in laga wada kaaftoomo gacanta dhinaca ammaanka ee laga helo Beesha Caalamka, gaar ahaan ciidammada AMISOM", ayuu ku taliyay Xasan Xayle oo ka faalloodo arrimaha Soomaaliya.
13 Jannaayo 2018